ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာသန်းမြင့်သည် ရန်ကုန်မြို့ရှိ ကာတာသံရုံးမှ သံရုံးယာယီတာဝန်ခံ (Charge d’ Affaires and Minister Plenipotentiary) ဖြစ်သူ Mr. Mansoor Mubarak S.B. AL-Khayarin ဦးဆောင်သော ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့အားလက်ခံတွေ့ဆုံ | Commerce
ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာသန်းမြင့်သည် ရန်ကုန်မြို့ရှိ ကာတာသံရုံးမှ သံရုံးယာယီတာဝန်ခံ (Charge d’ Affaires and Minister Plenipotentiary) ဖြစ်သူ Mr. Mansoor Mubarak S.B. AL-Khayarin ဦးဆောင်သော ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့အားလက်ခံတွေ့ဆုံ
Tue, 10/09/2018 - 08:27 -- adminDep
၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာလ ၉ ရက်နေ့ ၁၄း၀၀ နာရီအချိန်တွင် စီးပွားရေးနှင့် ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာသန်းမြင့်သည် ရန်ကုန်မြို့ရှိ ကာတာသံရုံးမှ သံရုံးယာယီတာဝန်ခံ (Charge d’ Affaires and Minister Plenipotentiary) ဖြစ်သူ Mr. Mansoor Mubarak S.B. AL-Khayarin ဦးဆောင်သော ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့အား ဝန်ကြီးရုံး၊ ဧည့်ခန်းမ (၁) ၌ လက်ခံတွေ့ဆုံ